12 April 13 - Fante online
Friday Sermon: Be Watchful of your Trusts and Covenants - 12th April 2013 - Fante Translation.
Fida Nyamesɛmka: Ebͻwbira 12, 2013.
(Friday sermon – 12th April, 2013 – Fante Translation)
HOM NYƐ AHWƐYIE WƆ AWERƐHYƐMUDZE NA MBRANSƐM HO.
Hadhrat Khalifatul Masih kenkaan Kuran mu nsɛm a odzi do yi dze hyɛɛ ne Fida Nyamesɛmka no ase.
“Ampaara dɛ Nyankopͻn hyɛ hom dɛ hom mfa awerɛhyɛmudze no a wͻdze ahyɛ hom nsa no mma ewuranom a ͻyɛ hͻn dze na ͻfata hͻn, na sɛ hom bu nyimpa ntamu atsɛn a hom mfa pɛrpɛryɛ mbu atsɛn tsenenee. Na osi pi dɛ dza odzi mu papaapa na Nyankopͻn dze ayɛ afotu ama hom! Nyankopͻn dze Ɔtse biribiara na Ohu adze nyinara” (4:59).
Dɛ mbrɛ Asͻrmba dodowara nyim no, afe yi yɛ abatow ber wͻ Asͻrmba nyinara mu. Abatow a wͻdze yiyi Ameerfo, Sadrfo na dzibewdzifo no osi mfe ebiasa biara. Mbeambea bi dze, abatow no ahyɛ ase dadaw. Majlis e Intikhab wͻ Jama’at akɛseakɛse no mu a woyiyi hͻn banodzifo. Dɛ mbrɛ ohia papaapa dɛ yɛpam dzibewdzifo ama Jama’at no ne nhyehyɛɛ akͻ do no, dɛmara so na ͻyɛ ehiadze papaapa dɛ yeyi nyia ͻsɛ fata dɛ ͻhwɛ Jama’at nhyehyɛɛ do. Ampaara dɛ iyi yɛ ehiadze ara ma Kuran Krͻnkrͻn no twe adwen gyina do, kyerɛkyerɛ mu yie fa nkorͻfo a ͻwͻ dɛ woyiyi hͻn wͻ dwumadzi ho. Ɔkyerɛ mu kyerɛ dzibewdzifo no so dɛ hͻn gyinabew no nnhyɛ ma gyedɛ wodzi dwuma a ͻbata hͻn dzibew no ho na sɛ wͻtͻ pitsi wͻ ho so a, Nyankopͻn enyi nnkɛgye hͻn ho.
Ahyɛdze a ofi Kuran mu a wͻabͻ dzin wͻ sor ha yi, yɛ dwumadzi a ͻfa no awerɛhyɛmudze; dɛm ntsi hom mpam hͻn a wodzi mu mapa wͻ hom enyi do. Hom nhwɛ nhu dɛ, wͻsɛ eso wobotum edzi dwuma no anaa wonnkotum. Dɛ mbrɛ hom nyinara hyia mu kyerɛ hom adwen wͻ Khalifa a osi do no, yɛ dwuma son no,dɛmara so na ͻwͻ dɛ hom dwen ho yie na wͻsͻr wͻ ho. Abatow no nnyi dɛ wͻma ogyina enuayɛ anaa anyɛnkoyɛ anaa ebusuayɛ do. Nnyɛ dzibewdzifo nko na Nyankopͻn bɛma woeebu nkontaa wͻ hͻn dwumadzi ho, mbom abatowfo no so beyiyi hͻn ano wͻ dɛ wͻanntow aba yie. Asɛmpa kͻ do twe adwen gyina dɛ, obi nnyi nyimdzee biara a ͻfa no hͻn a wͻrotow aba ama no ho a dza ͻwͻ dɛ ͻyɛ nye dɛ ͻyɛ asͻr ma Nyankopͻn dɛ ͻrotow aba ama nyia odzi mu mapa wͻ Nyankopͻn enyim.
Nokwar,nokwar dɛ, Nyankopͻn tse biribiara, Ohu adze nyinara, na Onyim dza ͻwͻ akoma mu, ͻnam dɛm ntsi, obiara nnkotum ayɛ no kwaa-dan-enyi. Nyankopͻn yɛ Jama’at agyedzifo no mboa wͻ ber a wͻnam dɛm mpaabͻ yi do rotow aba apam dzibewdzifo. Ɔyɛ hɛn Jama’at hͻn kusum dɛ wͻdze mpaabͻ bedzi bano wͻ dwumadzi biara mu na abatow so wͻdze mpaabͻ dzi bano. Abatow ho nhyehyɛɛ a wͻdze nokwardzi yɛ no, Nyankopͻn hyira do. Onyia no a ͻrotow aba no wͻ dɛ oyi ͻnoara n’apɛdze na nkitahodzi akwa. Ahmadiyyafo a wͻakyɛr wͻ som yi mu no nyim iyi, na afoforfo na mbrɛntse na nkatasia wͻ dɛ wohu dɛ Jama’at abatow yɛ adze a erekamfo obi ara kɛkɛ. khalifa a osi do seisei no nna ne sipi nyinara gyina no do. Akwan bi mu no sɛ obi nya aba dodow dzi nkunyim mpo a, wͻdze gyinabew no ma obi fofor. Ɔwͻ dɛ ͻda edzi so dɛ Ameer a ͻwͻ ͻman no mu wͻ ho kwan dɛ oyi obi mpo a o’ennya aba dodow wͻ abatow no mu no.
Mbom, Ameerfo wͻ dɛ wͻgye abatow no nsunsuando dodowara to mu. Ngyiresi Aborͻkyir man mu na Europe amanamanmu, USA, Canada na Australia nhu dɛ nhyehyɛɛ ma Ameer kwan ma ͻsesa kunyimdzifo wͻ abatow mu, yi nyia ͻno noara pɛ; afe yi mu abatow dze sɛ wͻpɛ nsesa bi a, ͻwͻ dɛ wͻma Hadhrat Khalifatul Masih n’aso tse na ͻgye to mu. Mbom Pakistan na Indiafo botum dze hͻn nhyehyɛɛ no edzi dwuma. Amila Kuw (Banodzifo a wͻwͻ ͻman no mu) no dze gyedɛ Khalifa agye hͻn ato mu wͻ ͻman biara mu ansaana woesi gyina.
Nsɛmpͻw a ofi Kuran mu “……. Hom mfa awerɛhyɛmudze a wͻdze ahyɛ hom nsa no mma ewuranom…..” na iyi so twa fa dzibewdzifo no ho. Woyiyi nkorͻfo binom a, sɛ yeyi abatow to nkyɛn a, wͻdze hͻn si gyinabew bi do na dwumadzi bi ho. Mfataho bi nye Rishta Nata kyerɛwkyerɛwnyi na ndwuma bi so wͻdze nkorͻfo binom wͻ edwuma ne fa bi mu ama hͻn. Sɛ ͻba no dɛ, wͻdze binom regyina gyinabew a ͻtse dɛm a, mma Ameerfo na Sadrfo mmfa nkorͻfo a hͻnara wͻpɛ anaa wͻnye hͻn wͻ nkitahodzi. Mbom wͻnhwehwɛ Jama’at no mu yie na wͻmfa nkorͻfo a wodzi mu mapa wͻ Jama’at no mu, amba no dɛm dza nna akɛyɛ eyimpamu-adze a Islamsom yi no akwa nye no. Mbom sɛ obi yi no ho nyimpa anaa ͻdze nyɛnko bi si gyinabew bi do a ͻsɛ fata a, hͻn a wotsia no no tsia no kwa. Wongyae dɛ wͻbɛyɛ dɛm.Ɔnnyɛ bͻn dɛ ebͻtwe abɛn Ameer anaaso dzibewdzinyi na onnyi dɛ wosiw obi kwan dɛ ͻnam dɛm ntsi mma ͻnnsom Jama’at yi. Wͻakyerɛkyerɛ dɛm asɛm yi mu osiandɛ obinom kasa tsia.
Nyankopͻn ka no wͻ Kuran mu dɛ “……..hom mfa pɛrpɛryɛ mbu atsɛn…..” Sɛ wͻdze enyimhwɛ na enyimpa kͻ do a wonnkedzi pɛrpɛr ma nsɛm ahwer nhyira. Dzibewdzifo wͻ dɛ wͻdze pɛrpɛryɛ na paapaamuka dzi nsɛm a ͻfa no obiara a ͻwͻ Jama’at yi mu ho. Onnyi dɛ ͻba dɛ obi ne nyɛnko nye dɛm osimesi anaa ofi dɛm ebusua yi mu ntsi woyi no akwa wͻ pɛrpɛryɛ ho. Dɛm nsɛm yi dze ebufuw ba Jama’at yi mu. Sɛ Khalifa a osi do yi regye nsɛm bi a, nokwar a ͻwͻ nsɛm no mu no na ͻwͻ dɛ wͻkyerɛw osiandɛ wͻahyɛ hɛn dɛ….‘hom mfa pɛrpɛryɛ mbu atsɛn…..’ Sɛ wͻdze nsɛm a ͻnnyɛ nokwar kɛma Khalifa a ͻbɛma ͻ’akyerɛ n’adwen na ͻayɛ dza ͻkyea (onnyim no dɛm) na bͻn a nkorͻfo a woenndzi nokwar no ayɛ asãa no;dwumadzi biara, ndzeyɛɛ biara a wͻdze ahyɛ wo nsa no wͻ dɛ edze adwenmudahͻ na nokwardzi dzi anaa eyɛ.
Sɛ wͻdze dwumadzi bi hyɛ wo nsa a, nna ͻnnkyerɛ dɛ eyɛ ͻbirempͻn. Nokwar, ͻyɛ edwuma son a ͻwͻ dɛ wͻdze mpaabͻ yɛ. Nyankopͻn ka dɛ Ɔyɛ … “ Nyia Ɔtse biribiara, Ohu biribiara….” Otsie mpaabͻ nkanka ber a ͻnye Ne mbransɛm rebedzi ehyia. Dɛ mbrɛ Nyankopͻn hwehwɛ abatowfo hͻn kͻsu na hͻn basu mu yie no, dɛmara so na Ɔhwehwɛ dzibewdzifo hͻn ndzeyɛɛ mu yie. Sɛ dzibewdzifo amma pɛrpɛryɛ enndzi dwuma a, Nyankopͻn se dɛ wobobu ho nkontaa. Ɔyɛ obiara n’asodzi dɛ wͻdze biribi bɛhyɛ ne nsa dɛ ͻnyɛ wͻ akwan horow mu. Nkorͻfo per gyinabew ho. Sɛ wonyim mbrɛ asodzi a ͻwͻ ho no ne kɛse tse na sɛ o’enntum annyɛ a, mbrɛ Nyankopͻn enyi nnkɛgye hͻn ho asen dwumadzi nkaa no ho a nkyɛ dzibewdzifo biara anafua na ewia nyinara ͻbɛyɛ Istaghfar (serɛ bͻnfakyɛ fi Nyankopͻn hͻ). Dzibewdzifo biara wͻ dɛ ͻyɛ n’adwen dɛ sɛ wͻpam no na wͻgye no to mu a, nna noho nntͻ no bi, mbom ͻyɛ nhyɛ ma no dɛ ͻdze n’ahoͻdzen dzi dwuma dɛ mbrɛ ͻsɛ na sɛ otwa abrͻdͻ a Nyankopͻn enyi nnkɛgye noho. Dzibewdzifo biara wͻ dɛ n’enyi kua ankorankor biara ͻnye dͻm a wͻwͻ Jama’at mu nyinara ho.
Dzibewdzifo biara wͻ dɛ ne gyinabew no yie amma ͻammfa fi annka Jama’at no anaa ͻanngye dzin bͻn wͻ no do. Ɔwͻ dɛ wͻma fasusu gyina pintsiin wͻ hͻn Nyamedwuma na wiadze dwumadzi so ho. Ɔnnyɛ adze a ͻsɛ dɛ wͻka dɛ asɛm bi yɛ mara m’asɛm, ͻmmfa Jama’at no ho, ma dɛm ntsi obiara botum ayɛ dza noara ͻpɛ. Ɔwͻ dɛ dzibewdzifo biara tse ase dɛ ne nyimpadua bata dza Jama’at no enyi gye ho wͻ ne nsɛm biara ho. Dɛm suban yi wͻ dɛ ͻda dzibewdzinyi biara edzi, na nkorͻfo a wodzi do no na ͻwͻ dɛ wͻpam hͻn. Yebotum aka so dɛ ͻwͻ dɛ wͻtow aba ma nkorͻfo a wͻwͻ Taqwa (tseneneeyɛ). Sɛ yɛka dɛ Imam a ͻaba hɛn ber do yi ama hɛn Taqwa do na yedzi hɛn awerɛhyɛmudze do kyɛn biribiara a, ͻno hɛn ahyɛdze wͻ Jama’at ho no wͻ dɛ yɛdze ahwɛyie na enyiwadzen yɛ.
Nyankopͻn ka no Kuran Krͻnkrͻn mu dɛ “Na nkorͻfo a wͻyɛ ahwɛyie wͻ awerɛhyɛmudze a wͻdze ahyɛ hͻn nsa na apam no” (23:9). Dɛm mbra yi wͻ dɛ bea a obiara wͻ no ͻhwɛ no yie. Awerɛhyɛmudze nnyi dɛ wobu no totooba wͻ ne nyɛe mu. Mbom, obiara wͻ dɛ ͻyɛ ne ndwuma dzendzeendzen na ͻdze enyidahͻ so yɛ, hͻn a wͻyɛ kua wͻ hͻn ndwuma ho na ͻwͻ dɛ wͻtow aba ma hͻn dze dwumadzi hyɛ hͻn nsa. Dzibewdzifo no na ͻwͻ dɛ odzi asɛm bi a ͻyɛ nyansapͻw dɛ “ebɛka woho akͻ Nyamesɛm ho akyɛn wiadze nsɛm ho” ma akyɛn biribiara. Otsia Islam nkyerɛkyerɛ dɛ ebɛper dzibewdzi. Mbom sɛ obi nya pɛ dɛ ͻbͻsom anaa wͻdze dwuma hyɛ obi ne nsa a, ͻno ͻwͻ dɛ ehu dɛ nnkotum edzi dwuma no gyedɛ apam a ahyɛ no idzi do papaapa.
Anohoba Messiah (ANN) no kyerɛɛ mbrɛ wosi dzi apam do. Nyankopͻn Kokroko no aka no asɛm dehye yi mu dɛ “Na nkorͻfo a wͻyɛ ahwɛyie wͻ awerɛhyɛmudze a wͻdze ahyɛ hͻn nsa na apam”…..hͻn a wonnyi dza odzi mu mapa a wͻdze kõ Nafse Ammarah (hɛn su a ͻtwe hɛn kͻ bͻn mu) ho akͻndͻ bͻn no, na wͻama wͻahyɛ hͻn amandzehu do no. Mbom bͻ mbͻdzen dɛ mbrɛ ibotum na dwendwen adze biara a ͻfa no wo awerɛhyɛmudze na Nyankopͻn N’apam ͻnye N’abͻdze ho; na bͻ mbͻdzen dɛ ebɛfa Taqwa no kwan ahorow no do. Wͻtsena dɛm kwan yi mu dɛ mbrɛ hͻn ahoͻdzen bɛma hͻn kwan. Kasafua Ra’oon (apam) a ͻwͻ asɛmsin no mu no, wͻka no wͻ Arabic kasandanenyi mu ber a obi nam akwan horow do wͻ asɛm mu a ͻnam n’ahoͻdzen na ne pɛ do dɛ adze suar dɛnara mpo a ͻbɛhyɛ no ma na onnkegyae biribi ketseketse mpo ato hͻ. Ampaara, asɛmsin yi kyerɛ dɛ agyedzifo dze ahoͻdzen a wͻwͻ nyinara fa Taqwa no kwan fɛɛfɛw no do na wͻmmpɛ dɛ wobegyae ne fa biara a ͻfa no awerɛhyɛmudze na apam ho na wͻpɛ dɛ wͻnye obiara yɛ nhyehyɛɛ wͻ ho. Wonnyi enyigye dɛ wͻbɛfrɛ hͻnho dɛ wͻyɛ nokwardzifo na wͻdzi hͻn ho nyi; ampaara wosuro adze amma wͻnnayɛ bͻn ennsuma wͻ awerɛhyɛmudze ho. Wͻkͻdo ara dwendwen hͻn ndzɛmba nyinara ho yie amma wͻannyɛ bͻn anaa wͻammfom. Dɛm ndzeyɛɛ yi nye Taqwa.
Sɛ yɛtwa no sin a woyinom nye agyedzifo a biribara nnsi hͻn ban wͻ hͻn ndzeyɛɛ mu, sɛ ͻfa Nyankopͻn ho o, sɛ ͻfa no nyimpa ho o. Nokwar, ͻnam sombͻ wͻ Nyankopͻn Kokroko enyim ho suro ntsi wͻhwɛ yie mapa wͻ awerɛhyɛmudze na apam ho. Aber biara wͻyɛ mpɛnsampɛnsamu fa hͻn awerɛhyɛmudze na apam ho na ofi ber to ber no wͻnam Taqwa do hwehwɛ hͻn tsebea mu kofekofe; wosuro dɛ bi a nna wͻayɛ mfomdo bi etsia hͻn awerɛhyɛmudze a Nyankopͻn Kokroko dze ama hͻn no; mfafakuwa nyinara; hͻn nsa tsiaba, hͻn bra, hͻn ahodze na enyimnyam na dza ͻkeka ho nyinara a Taqwa taa akyir dze dzi dwuma wͻ ne mber mu. Aber biara wͻdze wansawansayɛ a ͻkrͻn mapa dze yɛ edwuma na wͻbͻ mbͻdzen a bͻhyɛ a wͻnye Nyankopͻn Kokroko ahyɛ no wͻ ber a nna wͻregye som no ato mu no wͻbɛhyɛ no ma. Hͻn ndzeyɛɛ bi so nye dɛ, wͻbͻ hͻn ho mbͻdzen biara dze Taqwa dzi dwuma biara a nkorͻfo dze ahyɛ hͻn nsa anaa nsɛm a ͻba hͻn nsiesie ase.
Na yɛbɛhyɛ n’anohoba nyinara ma na hɛn honamdua n’akwaa nyinara ayɛ adwuma dɛ mbrɛ ͻsɛ, tse dɛ hɛn enyiwa, asowa nsa anan nye dza ͻkeka ho nyinara ͻnye hɛn adwen nye hɛn tum nyinara bɛyɛ dza ͻfata wͻ ne aber do, na yɛbenya kokobͻ wͻ bͻn akwan nketsenketse ho na yɛahwɛ ahyɛdze a ͻwͻ dɛ yɛdzi ma hɛn enuanom. Iyi nye kwan a yɛbɛfa do ama hɛn sunsum mu ahofɛw ahyɛ ma. Nyankopͻn akyerɛ wͻ Kuran mu dɛ tseneneeyɛ tse dɛ atar. Libas-ut-taqwa dɛ mbrɛ wͻaka no wͻ Kuran mu no, iyi kyerɛ dɛ yɛbenya sunsum mu ahofɛw nye atar pa efi tseneneeyɛ mu. Tseneneeyɛ kyerɛ dɛ yɛbɛyɛ ahwɛyie wͻ ndzɛmba nketsenketse ho wͻ dza Ɔdomankoma dze ahyɛ hɛn nsa nye asodzi a ͻda hɛn do ma hɛn mfɛfo, dɛ mbrɛ hɛn ahoͻdzen botum. Kyerɛ dɛ, ͻwͻ dɛ yɛtum yɛ dza ͻda hɛn do nyinara wͻ hɛn ahoͻdzen do ’ [Brahin-e-Ahmadiyya, Part V, Ruhani Khaza’in, vol. 21, pp. 209-210 – Essence of Islam, Vol. I. pp. 347 - 348].
Sɛ Nyamesuro gyinabew annkͻ sor a, yɛnnkotum eyi asodzi a ͻda hɛn do ma Nyame nye hɛn mfɛfo nyimpa. Dzibewdzifo yɛ, tsitsiriw, ahwɛdofo ma dɛm nsɛm yi. Hadhrat Khalifatul Masih san si do bio dɛ, ͻwͻ dɛ Jama’at mba no yɛ asͻr na woyi nkorͻfo a wobedzi nokwar wͻ hͻn dwumadzi mu. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ obiara ma ne Nyamesuro tu kafo. Anohoba Messiah (ANN) no akyerɛ hɛn dɛ ͻwͻ dɛ yɛdze obiara ne ndzenoa ma no dɛ mbrɛ ͻfata. Sɛ yɛannyɛ dɛm a nna yɛnndzi hɛn bͻhyɛ do. Ɔwͻ dɛ obiara ma ne Nyamesuro gyinabew kͻ sor na ͻhwɛ n’abrabͻ mu yie. Okuw yi mu mba ara na woyi hͻn mu binom ma wͻbɛyɛ banodzifo. Dɛm ntsi ͻwͻ dɛ dzibewdzifo nye asͻrmba nyinara nya suban a morobobͻ edzin yi: ͻwͻ dɛ yɛhyɛ hɛn anohoba ma, sɛ kuw yi mu mba taa pon hͻn anohoba a, ͻno dzibewdzifo so bɛyɛ dɛmara. Sɛ yɛammpon hɛn anohoba a, nna yɛannyɛ hɛn asodzi ho edwuma dɛ mbrɛ ͻfata. Anohoba Messiah (ANN) no kyerɛ dɛ, ͻwͻ dɛ yɛdze obiara ne ndzenoa ma no, kansa sɛ yɛbͻkͻ ͻhaw bi mu mpo a. Islam yɛ asomdwee som na ͻkyerɛ asomdwee kwan a wͻdze yɛ adze naaso Muslimfo nndzi hͻn anohoba do. Dɛm ntsi ͻdze basabasayɛ pii aba hͻn mu. Iyi so ama bi aka Ahmadiyyafo. Anohoba a ͻwͻ dɛ yɛhyɛ no ma no nnyɛ asɛm kumaabi dɛ eguadzi ho nhyehyɛɛ. Aware so yɛ bͻhyɛ naaso nyimpa pii nndzi mu nokwar. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ me edzi kan aka dadaw dɛ nyimpa no pii wͻ hͻ a wͻyɛ Jama’at edwuma yie dɛ mbrɛ ͻsɛ naaso wͻnndzi hͻn bͻhyɛ do mma hͻn ebusuafo (yer na mba). Iyi yɛ bͻn kɛse wͻ Nyankopͻn enyim na ͻdze asotwe so ba. Nyankopͻn ka dɛ “na bͻhyɛ no dze wͻbebisa ho asɛm (17:35). Nyankopͻn akyerɛ ahotseweefo suban dɛ “na hͻn a wͻhyɛ hͻn bͻhyɛ ma sɛ wͻhyɛ bͻ a” (1:178). Sɛ Ahmadiyyafo pɛ dɛ woyi obi banodzinyi a, wͻnhwɛ mbrɛ osi dzi n’anohoba do.
Wͻaka bio so dɛ, hom pɛ dɛ hom nya asomdwee asetsena a, hom nhwɛ hom atsenka yie. Mma hom ntwitwa hom ho anantsir na mma hom nntoto hom ho edzin bͻn (49:12). Arabic kasa a wͻaka no ha yi wͻ nkyerɛmu pii. Ɔtͻ ber bi a yɛkyerɛ ebufuw dze sesa ndzeyɛɛ yɛ no yie, naaso ͻwͻ dɛ Jama’at mu dzibewdzifo no nya abotar.Ɔmmfata dɛ dzibewdzifo benya ebufuw. Ɔwͻ dɛ wͻkae dɛ Kuran se; ‘hom nkasa nkyerɛ nyimpa wͻ ahobrase mu’ (2:84). Sɛ yedzi iyinom do a nkorͻfo begyae dɛ wͻbͻ dzibewdzifo sombo. Dzibewdzifo wͻ dɛ wͻnya tsema ma hͻn ho. Onnyi dɛ ͻyɛ dɛ wiadze yi mu mpanyinfo na hͻn nkowaa. Sɛ obi yɛ mfomdo a, ͻwͻ dɛ yɛdze abotar kyerɛkyerɛ no mu.
Suban pa kor so a ͻwͻ dɛ dzibewdzifo nya nye dɛ, ͻwͻ dɛ wͻyɛ ahwɛyie wͻ Jama’at ne sikasɛm ho wͻ aber a wͻdze reyɛ biribi. Onnyi dɛ wͻsɛe sika wͻ kwan biara do. Ɔwͻ mu dɛ asoɛe bi tsedɛ Ziafat (Ahͻhosom asoɛe), Langar (Gyaadze) nye Jalsa Salana nya sika akɛse naaso ͻwͻ dɛ wͻyɛ ahwɛyie papaapa. Ɔwͻ dɛ yɛhom sikasɛm ho nhyehyɛɛ do dɛ mbrɛ wͻnnkɛsɛe sika pii. Iyi nye kwan a wͻbɛfa do edzi nokwar wͻ dza wͻdze ahyɛ hͻn nsa no ho.Anohoba Messiah (ANN) no ennya haw dɛ yɛnnkenya sika, mbom hͻn a wͻbɛhwɛ sika yi do yie na ohia no. Dzibewdzinyi ne suban pa kor so nye dɛ obeyi nsɛm hun nyinara akwa. Mpo iyi hia ma agyedzifo nyinara na mbom edzikanfo tsitsiriw no wͻdɛ wͻyɛ iyi ho fasusu. Nyankopͻn aka dɛ “na hͻn a woyi nsɛm hun akwa no” (23:4). Ɔwͻ dɛ dzibewdzifo no gyinabew kͻ sor yie. Onnyi dɛ wodzi nsɛm hun ekyir anaa wͻtsena bea a worisi nyimpa binom atwetwe. Ɔto fa bi a dzibewdzifo so tum hyia si nkorͻfo bi atwetwe. Ɔwͻ dɛ yeyi iyi fi hɛn akoma mu. Onnyi dɛ dzibewdzifo tsena bea a woridzi Nyankopͻn ho fɛw.
Anohoba Messiah (ANN) no ka dɛ, dɛ yɛbɛtwe hɛn ho efi nsɛm hun ho no yɛ agyedzifo suban. Sɛ obi yɛ mfomdo a, ͻwͻ dɛ yɛdze abotar nye ͻdͻ kyerɛkyerɛ no mu na mbom mma yɛnnyɛ dɛ mbrɛ wiadze ahenfo wosi bisabisa hͻn nsɛm no. Sɛ obi renndzi mbra bi do a, ͻwͻ dɛ wͻka ho asɛm kyerɛ no anaaso wͻkɛka kyerɛ mpanyimfo. Onnyi dɛ yɛma mpaapaamu bɛda hɛn ntamu. Dzibewdzifo wͻ dɛ wͻhwɛ ahͻho yie na wͻgye hͻn awaawaa etuu. Obiara a ͻbɛba hɛn asoɛe no ͻwͻ dɛ yɛma no enyidze na yɛma no egua ma ͻtsena ase. Asɛm yi ho hia papaapa ara yie. Ɔwͻ dɛ onyia no sͻr na okyia ͻhͻho no. Ɔwͻ dɛ dzibewdzifo a woeyi hͻn no dzi dɛm nsɛm yi do. Dɛmara so na ͻwͻ dɛ edwumayɛfo nkaa no nyinara so yɛ. Iyi mma hɛn enyimnyam do nntsew na mbom ͻto hɛn enyimnyam mu.
Ahobrase yɛ adze a Ahmadiyyanyi biara wͻ dɛ onya nkanka dzibewdzifo. Wͻaka dɛ: “Na mma nnantsew asaase yi do ahantan mu” (17:38). Nyankopͻn mmpɛ ahomemado wͻ nyimpa mu. Dɛm ntsi Nyankopͻn nnkɛpɛ mprempren ahomemado wͻ hͻn a ͻnam Ɔno ntsi wͻdze hͻnho ma wͻ dwumadzi ho. Dɛm tsebea yi wͻ dɛ dzibewdzifo biara nya no pɛpɛɛpɛ. Adze kor so a ohia ma nkanka hͻn a wͻdze dwumadzi ahyɛ hͻn nsa a ͻfa no adwenkyerɛ na nsiesie ho a ͻtse dɛ Islahi Apamfo (Islahi Committee) anaa Qadha Board. Ɔwͻ dɛ wͻkaakaa Nyankopͻn ne mbra “…..hom ndzi pɛrpɛr aber biara, ͻno na ͻbɛn tseneneeyɛ” (5:9). Ɔwͻ dɛ wͻdze paapaamuka na pɛrpɛr si gyina biara. Ɔtͻfabi a, wͻdze nsɛm bi a woesi no gyina kɛma Hadhrat Khalifatul Masih nna wͻnnyɛɛ nhwehwɛmu yie ma ͻba no dɛ hͻn a asɛm no fa hͻn ho no tseetsee. Gyinasi biara a wͻnam Shariah do si no wͻ dɛ wͻkyerɛmu pefee. Qazisfo wͻ dɛ wͻhwɛ iyi yie papaapa.
Beebiara a akͻhweaban na ehiafo wͻ no, Jama’at wͻ dɛ ͻkͻ hͻn mboa. Ɔyɛ Ameerfo na dzibewdzifo hͻn dwuma son dɛ wͻfa ahom a wͻwͻ no do hwɛ hͻn.Ɔfa no iyi ho no onnkehia dɛ ͻyɛ aserɛdze ansaana wͻakͻ hͻn mboa. Mbom, ͻto ber to ber no, ͻwͻ dɛ wͻhwehwɛ mu adze. Ahyɛdze son a ͻda Ameerfo, Sadrfo na dzibewdzifo biara do nye: Hom nkyerɛkyerɛ dza ͻyɛ papa na hom mbra bͻn (3:111). Ɔwͻ dɛ wͻdze iyi to hͻn adwen do aber biara. Ampaara, yebotum edzi iyi do ber a yɛahwehwɛ hɛn ndzeyɛɛ mu na yɛama hɛn nsɛm edzi mu, na yɛenya ͻdͻ na Nyankopͻn ho suro na yɛahwehwɛ Taqwa n’akwan no a Nyankopͻn atwe hɛn adwen egyina do no. Ɔfa no iyi ho no, Anohoba Messiah (ANN) no kaa no ber bi dɛ; Taqwa nkyerɛ dɛ ibeyi bͻn kumaabi akwa na afa papayɛ kumaabi. Mbom, Taqwa ase nye dɛ ibeyi bͻn ketseketse biara akwa na afa papayɛ biara.
Hadhrat Khalifatul Masih dze ne Nyamesɛmka rokͻ ewie no, ͻkaa dɛ “Iyinom nye gyinabew a ohia dɛ yɛfa do ama yɛayɛ papa na yɛeyi dza ͻyɛ bͻn no akwa na yɛahyɛ hɛn apam no mã. Kɛtseankyɛ Allah Kokroko no ama Jama’at ͻnye dzibewdzifo, hͻn a wͻapam hͻn nna hͻn a wͻrebɛpam hͻn no, ͻnye emi eetum ahyɛ hɛn awerɛhyɛmudze ͻnye hɛn apam mã. Sɛ wontwewontwe bi si a, wͻdze Taqwa siesie, sɛ dɛm nsiesie no tsia hɛn mpo a [Wͻkyerɛ ase fii Kuran Krͻnkrͻn ne Tafseer Nkyerɛasee a Anohoba Messiah kyerɛwee no Vol III, pp. 366 – 367].Onyimpa no sunsum mu ahoͻfɛw nye dɛ ebɛnantsew kwan tsenenee fɛɛfɛw no mu. Iyinom nye ndzɛmba a wͻyɛ sunsum mu ahoͻfɛw. Ɔda edzi dɛ ebotum enya adwentsimii wͻ Nyankopͻn awerɛhyɛmudze no ho.